Flavor akpọgala Semah India imezi ya anya – hoo!haa!!
INDIA: Flavour “N’abanịa” e mekwaala ka ọ si eme. Ozi ruru hoo!haa!! aka na-ekwu na Flavour akpọrọla “nwa ya nwoke” bụ Semah Weifur, nwa Liberia so ya agụ egwu kpụrụ isi gaa New Delhi, India Maka ịwa ya anya iji mee ka ọ hụwa ụzọ.
Nwatakịrị nwoke a bụ Semah Weifur kpuru isi site n’afọ nne ya bụrụkwa onye amụ nyere n’ụbịam. N’ihi nkea, ebe o toro bụ n’ogige otu kwụụrụ onwe ya bụ Christian Association of the Blind (CAB) bụ ndị na-elekọta ndị kpụrụ isi enweghị ka ọ hà ha na Monrovia bụ isi obodo Liberia.
N’agbanyeghị isi o kpuru, Semah bụ nwa nwere nnukwu onyinye ọnatarachi n’ịgụ egwu. Ọ na-agụkwa ya agụụ nke ukwuu izute “Ijele Afrịka” bụ onye nke ọ na-eṅomi n’ịgụ egwu.
Chineke zara ya ekpere n’abalị iri abụọ n’otu nke afọ 2017 mgbe Flavour bịara Monrovia ebe e chiri ya echichi dịka Chief Zanzan nke Liberia, na nkwanye ugwu maka ‘nnukwu mbọ’ ọ na-agba ikwalite egwu n’Afrika.
N’ebe ahụ, a kpọlitere Semah ka ọ gụọ egwu ọ kpọrọ “Mama”. N’ihi etu Semah siri wee gụọ egwu ya ahụ, Ijele bịara si n’azụ makụọ ya. Etu ahụ ka ụtọ ha sịrị bido.
Na Juun, afọ 2017, ka Flavour tiputara efere egwu nke ise ya, Ijele-Onye ije ebe e nwere otu egwu ụka ya na Semah gụrụ a kpọrọ “Most High”.
N’abalị iri n’abụọ nke ọnwa Maachị, afọ 2018, ha abụọ tiputara efere egwu bụ sọọsọ egwu ụka – Divine. Nke a bụ ihe ịtụnanya maka na Flavour bụ onye eji egwu akwamiko dịka “ashawo” na “pant nọ n’iro” wee mara na-agụzị egwu ụka. N’ihi ya, ọ dịka Flavour mere ndụ Semah gbanwee ebe Semah mekwara ka ndụ Flavour gbanwee.
hoo!haa!! na-arịọ biko onye hụrụ Flavour “Ijele Afrịka” ka o kelee ya maka ọrụ ọma. Phyno na ndị ọzọ kwesịrị iṅomi udiri ezigbo agwa a.
Previous Post: “Word4Word Art Project”na-afịọ n’Enugwu
Next Post: ARỤ! MMỌNWU NA-AṄỤ HERO!